ချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပါ... ⋆ Popular
MCBA – Myanmar Carreer Bridge Academy သင်တန်းကျောင်း၏ ပဲ့ကိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်မော်မော်ထွန်း၏ လူငယ်များအတွက် အကြံပြုချက်ကို တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
ကျပ် ပြား မဖွဲ့တတ်ဘူး။
CV ပေါင်းများစွာ ဒီလိုတွေ ခပ်များများပါ။
တက္ကသိုလ်က ယူခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ကိုတောင် ဖြစ်သလို ဖြည့်တာ အပြင်
ယူထားတဲ့ Diploma တွေမှာလည်းပဲ
Logistics & Supply Change* ဆိုတာမျိုး
Career ကို Carrier လို့ ပေါင်းထားတာမျိုး
ယနေ့ခေတ် အလုပ်ရှာကြတဲ့ ဘွဲ့ရလူငယ်များနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားမလိုအားမရ ဖြစ်ရတာ အများသားပါ…
လူငယ်တွေ အားပေးတွဲခေါ်ဖို့ ဆိုရာမှာ မြှောက်ပင့်တွဲခေါ်တာထက်
အမှန်အတိုင်း ထောက်ပြဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်…
အမှန်ကို မြင်မှ ပြင်သင့်တာ ပြင်နိုင်ကြမှာပါ..
ယခုပို့စ်မှာ လူငယ်များအား နှိမ့်ချချိုးဖဲ့လိုစိတ်မရှိ
ဖတ်ရှုမိကြပြီး ကိုယ်မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်သတိပြုနိုင်ကြစေဖို့ပါ….
ကျွန်မတို့ ကျောင်းမှာ (MCBA) အခါအားလျော်စွာ လုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ Career Choice နဲ့ Job Hunting ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ဟောပြောပွဲလေးတွေမှာ အမြဲ ပြောရပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် လူငယ်လေးတွေကို ပြောရင် အလွယ်ကူ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ မြင်သာ
မှု အရှိဆုံး နမူနာလေးတွေ ကြံဆပြီး ပြောရပါတယ်…
CV ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်း လက်ကမ်းစာစောင်တွေလိုပါပဲလို့..
အလုပ်အကိုင် တစ်ခု ရရှိဖို့ ပထမဆုံး အဖြစ် (ပစ္စည်းကို လာရောက် ရွေးချယ်မြည်းစမ်းကြည့်ခြင်း မပြုခင် အကြောင်းသိဖို့ လက်ကမ်းစာစောင်လေးဝေရသလို) ကိုယ့် အရည်အသွေး၊ အရည်အချင်းတွေကို အင်တာဗျူးခန်းထဲမှာ လူတွေ့ မေးမြန်းစူးစမ်း မှု မပြုမီ ကိုယ့် CV ကို ဖတ်ပြီး ခေါ်တွေ့ချင်စိတ် ပေါက်သွားအောင် ရေးရမှာမို့ ဖြစ်သလို ဖြည့်စွက် ပြီး မပို့လိုက်သင့်ပါဘူး။
CV ပေါ်မှာ ကိုယ်တက်ရောက်ထားတဲ့ ကျောင်း၊ ရရှိထားတဲ့ Diploma တွေဖော်ပြထားပြီ ဆိုရင်တော့ အင်တာဗျူး အခေါ်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေမေးမှာလဲ မသိဘူး ဆိုပြီး ယောက်ယက်ခတ်မနေဘဲ တက်ထားတဲ့ သင်တန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်ဘာတွေသင်ယူရရှိခဲ့သလဲ။ ဘာတွေ အဓိက မှတ်သားခဲ့ရလဲ ဆိုတာကို ပြန်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပါပဲ။ လိုအပ်ရင် စာအုပ်တွေ ပြန်ထုတ် ဖတ်ထားပါ။
တကယ်တမ်း Certificate တွေ Diploma စာရွက်တွေဆိုတာ CV နဲ့ တွဲတင်လိုက်တဲ့အခါ Interview အခေါ်ခံရဖို့ Chance များတယ် ဆိုပေမယ့် အလုပ်ရဖို့ အာမခံနိုင်တာ အဲသည် စက္ကူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အဲသည် သင်တန်းတွေမှာ သင်လိုက်တဲ့ ပညာရပ်တွေ ကိုယ့်ခေါင်းထဲ ဘယ်လောက် ကျန်ခဲ့သလဲ၊ လုပ်ငန်းခွင် အသုံးချ ချိတ်ဆက် တွေးခေါ်နိုင်မှု ဒါလေးတွေ မေးမြန်းခံရဖို့ ရာနှုန်းများပါတယ်။ ဒါလောက် တော့ ပြင်ဆင် လာဖို့လိုပါတယ်။
သင်တန်းတက်လာတဲ့ Diploma တွေအရ အတော်လေးတော့ စာတွေသင်ထားတာပဲ ဆိုပြီး အင်တာဗျူး ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ Diploma Original File ကို ဝံ့ကြွားစွာ ကိုင်လာခဲ့ပေမယ့် နည်းနည်းလောက် စာအကြာင်းမေးလိုက်တာနဲ့ ရယ်ဖြဲ ရယ်ဖြဲ နဲ့ ကျောင်းမှာတော့ သင်ခဲ့တာပဲ၊ စာတွေကတော့ မေ့ကုန်ပြီ။ ဟီးဟီး… ဟဲ ဟဲတွေဖြစ်ကုန်ပါရော။
အထူးသဖြင့် ကိုယ်လျှောက်ထားတဲ့ အလုပ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သင်တန်းတွေ တက်ထားတယ် ဆိုရင်တော့ မေးခံရဖို့ များတာမို့ အင်တာဗျူးခန်းထဲကို မပြင်မဆင် ဝင်ရောက်တာမျိုးတွေကို အလွန်ပဲ အားမရ ဖြစ်ရတယ်။
အင်တာဗျူး ခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက လစာ ဘ ယ်လောက်ရမလဲ၊ ခွင့်ရက် တွေက ဘယ်လို ပေးလဲ၊ ပိတ်ရက် ဘယ်နရက်လဲ၊ အလုပ်ချိန်က ဘယ်လောက်လဲ။ အိုဗာတိုင်ရှိမှာလား စတာတွေကို သိချင်စိတ် သက်သက်နဲ့ အလုပ်ကို ခေါင်းခေါက်ရွေးဖို့ စဉ်းစားထားရင် ကိုယ့်ကိုလည်း အလုပ်ရှင်က က ခေါင်းခေါက် ရွေးဦးမှာ ဆိုတာတွေကို မမေ့ကြဖို့ လိုပါတယ်…
အချို့ကတော့ ဒီပလိုမာ တစ်စောင်တိုးတိုင်း လစာ ၁သိန်း ၂သိန်းလောက် တိုးရမယ် အပိုင်တွက်တတ်ကြသေးတယ်။ ဒါတွေလည်း တက်ပြီးပြီ ဆိုတော့ လစာက တိုးပေးသင့်ပြီလေ။ ဒါပေမယ့် တိုးမပေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် အလုပ်သစ်ရှာတာ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ တက်ပြီးပြီ ဆိုတော့ ဘာတွေသိသွားသလဲ၊ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင် က Functions တွေနဲ့ ချိတ်ဆက် နားလည်သွားသလား၊ ဘယ်လိုဟာလေးတွေ အသုံးချကြည့်သလဲ ဆိုတာမျိုးလေးတွေကို ဆက်ပြီး တီးခေါက် မေးကြည့်ရင် လုံးဝ မရတော့ပြန်ဘူး။
သည်တော့ သင်တန်းတက်တာ လက်မှတ်ရဖို့ လစာတိုးဖို့ တက်တာလား၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒီထက် ဒီထက် ပိုမို ကောင်းမွန် ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တက်ဖို့ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ တက်ကြတာ မဟုတ်ရင် Certificate/Diploma ဟာ လစာတိုးဆေး မဟုတ်ပါ။
နောက်ထပ် အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာ တစ်ခုနဲ့ ပြောပြရသေးတာက အလုပ်အင်တာဗျူး ဆိုတာ အရောင်းအဝယ် Deal တစ်ခု ဆိုတာ မမေ့ကြဖို့ပါ။
အလုပ်ရှင်ထံက အလုပ်လိုချင်တယ်။ အတွေ့အကြုံလိုချင်တယ်။ လစာလိုချင်တယ်။ အခွင့်အရေးတွေ လိုချင်တယ်။ (ဒါက ကိုယ့်ဘက်ကအတွေး)
သူ့ဘက်က ပြန်တွေးပါ။ ဟုတ်ပါပြီ ငါ့ကို သူက ဒီအလုပ် ပေးရမယ့် အကြောင်းတရား၊ အတွေ့အကြုံရအောင် သင်ပေးချင်မယ့် အကြောင်းတရား၊ လစာပေးချင်စိတ် ရှိမယ့် အကြောင်းတရား။
သူ့ဆီက ဒါတွေ လိုချင်ရင် ငါ့ဘက်က ဘာတွေ ပေးမှာလဲ ဆိုတာကြိုတွေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်ဘာတွေ တတ်ထားကြောင်း
ဥပမာ အားဖြင့် ” သမီးက ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်မဝင်ရသေးပေမယ့် Computer သင်တန်း တက်ထားပါတယ်။ သေချာလည်း လေ့ကျင့်ထားတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ စာစီစာရိုက် မြန်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလည်း တက်ထားပါတယ်။ အကျွမ်းကျင်ကြီး မပြောတတ်ပေမယ့် အတော်အသင့် နားလည်ပြီး အထိုက်အလျှောက် ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။ လုပ်သက် မရှိသေးပေမယ့် HR Certificate သင်တန်းလေး တက်ထားတော့ စာတွေ့အားဖြင့် အနည်းအပါး တတ်ထားတာမို့ HR ဌာနက Senior တွေနဲ့သာ တွဲလုပ်ခွင့်ရရင် မကြာခင် ပဲ HR ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်လာမယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ လုပ်သက် နည်းနည်း ထပ်ရရင် ဒီထက် တာဝန်ကြီးတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်အောင် Diploma သင်တန်း လည်း ထပ်တက်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်”
လို့များ ဖြေရင်လေ… မခန့်ချင်ဘဲ မရှိကြလောက်ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘက်က ပြင်ဆင်လာမှုက ဘွဲ့ကရထားတယ်။ ဘွဲ့နဲ့ ပတ်သက်တာလေး မေးလိုက်ရင် လည်း ဘာမှမဖြေနိုင်။
Computer သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်တော့ရှိ။ စာစီစာရိုက် သိပ်မရ။
(Assistant အဖြစ် ခန့်ပြီးရင်တောင် ရုံးစာရိုက်ဖို့ လက်ထောက် တစ်ယောက် ထပ်ခန့်ပေးရတော့မလို)
မြန်မာလက်ကွက်က မရဘူး။ (တစ်သက်လုံး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေမှာ လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ် ဆိုရင်တောင် အလုပ်ဝင်ကတည်းက မန်နေဂျာကြီး တန်းလုပ်မယ် ဆိုရင်တောင် Computer သုံးတတ်ဖို့ အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ နှစ်မျိုးလုံး ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် ရိုက်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်……. ) ဖုန်းပေါ်မှာ လက်မ တစ်ချောင်း လက်ညိုးတစ်ချောင်းနဲ့ ရိုက်တတ်တာကိုလည်း တတ်တယ် ဖြေတာ ကြုံဖူးရဲ။
English ဆိုရင်လည်း Certificate ပြနိုင်ပေမယ့် အဆင်မပြေ တာတွေ အများကြီးပါ။
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်…
တက်ကြွသွက်လက် လူငယ်တွေနဲ့ လက်တွဲပြီး….
လုပ်ငန်း ကြီးတွေ ချဲ့ထွင်ဖို့ အိပ်မက်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ လည်း အများကြီးပါ….
ကိုယ့်ဘက်က ကောင်းကောင်းလေး ပြင်ဆင်ထားကြပြီး
အလုပ်တွေ လျှောက်ကြပါ လို့…
မရ မရှိစေရပါဘူး.. ရကြမှာပါ…
ငွေမရှိလို့ ဘာသင်တန်းမှ ထပ်မတက် ထားနိုင်ဘူး ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်အပေါ် စိတ်အားထက်သန်မှု နဲ့ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝမှု တွေရှိနေရင် လည်း ခန့်ကြဦးမှာပါပဲ… သည်တော့ ခေတ် နဲ့ မျက်ခြေမပြတ်အောင် နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး သတင်းလေးတွေလည်း ဖတ်ထားမှတ်ထား ကြဖို့ကောင်းပါတယ်။
စစချင်းမှာ အကောင်းဆုံး အလုပ် မရရင်တောင် ရတဲ့ အလုပ်မျာ အကောင်းဆုံးလုပ်ရင်း ကိုယ့်က အလုပ်တွေကို ခေါင်းခေါက်ရွေးရတဲ့ ဘဝရောက်အောင် ရသမျှ အခွင့်အရေးထဲကနေ အကောင်း ဆုံး လေ့ကျင့်ထားကြဖို့ပါပဲ….
အကောင်းဆုံးတွေ နဲ့ တွေ့ရမှာပါ…
MCBA- Myanmar Career Bridge Academy
A Bridge to your successful career…
သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ MCBA သင်တန်းကျောင်းမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဒိပလိုမာ ဖြစ်တဲ့ abe-UK သင်တန်းများ တက်ရောက်နိုင်ကြပါပြီ……
အမှတ် ၃၇/F လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး
ဖုန်း 01 8 561 416, 099 77 90 66 40
အော်ပရာကပြတဲ့အခါ ကက်ဆက်ကြီးကိုဖွင့်ပြီး အရှေ့ကနေ သရုပ်ဆောင်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး ဝင်းနောင်
မိဘမဲ့ကလေးများ၊ ကျောင်းသားများအတွက်ရေလောင်းအိမ်သာနှင့် ကျောင်းဝတ်စုံများလှူဒါန်း